စာပေချစ်သူများ INSTAGRAM ပေါ်တွင်နေရာယူလာခြင်း - Goethe-Institut
၂၀၁၉၊ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ Buenos Aires မှနိုင်ငံတကာစာအုပ်ပွဲတော်တွင်လာရောက်လည်ပတ်သူ။ | ဓါတ်ပုံ။ ။ © picture alliance/ZUMAPRESS.com/Claudio Santisteban
Instagram သည် လတ်တလောရေပန်းအစားဆုံးလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုဆိုလျှင် စာအုပ်ဘလော့ဂါများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် ပလက်ဖောင်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ (၂၂၀၀) ထက်မပိုသောစာလုံးရေနှင့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထပ်ဆောင်းပါသည့် စာပေ‌ဝေဖန်ရေးပုံစံအသစ်ကိုရှုစားကြည့်ပါ။
Instagram ကို အသုံးပြုသူဦးရေ တစ်သက်တာအမြင့်ဆုံးစံချိန်မှာ - လူဦးရေ တစ်ဘီလီယံဝန်းကျင်သည် ထိုအက်ပလီကေးရှင်းကို လစဉ်အသုံးပြုနေသည်။ (၅၀၀) မီလီယံခန့်က နေ့စဉ်ဘဝတွင်အသုံးပြုနေသည်။ အသုံးပြုသူများစုမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီး၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ရုရှားတို့မှဖြစ်ပြီး မည်သို့ဆိုစေ ဂျာမနီ၌ (၂၀၁၇) ဩဂုတ်လ နောက်ဆုံးတရားဝင်အချက်အလက်များအရ (၁၅) မီလီယံခန့်ရှိသည်။
Instagram ပလက်ဖောင်းသည် အလားလာရှိပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကာအရောင်းအဝယ်လုပ်၍ရသည့်ဈေးရောင်းစက်လည်းဖြစ်နေပြန်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်အားထက်သန်လုံလစိုက်ထုတ်မှုနှင့် မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တတ်ကျွမ်းနားလည်မှုရှိရုံနှင့် လူတိုင်းသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် influencer (ဩဇာလွှမ်းမိုးအရာရောက်သူများ) ဖြစ်လာနိုင်သည်။ တကယ့်တကယ်တွင် အတော်ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အရာများကိုဖန်တီးရန်မှာ မည်သည့်အခါကမျှ ဤမျှလောက်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် အတန်ငယ်ကောင်းမွန်သည့်ကင်မရာရှိရုံမျှဖြင့် လုံလောက်လာသည်။ လိုက်ဖက်မည့်ဓာတ်ပုံဖေလ်တာ (filter) တစ်ခုခုကို သုံးပြီးနောက် အသုံးပြု၍ရပြီဖြစ်သည်။
ထိုအတွေးသည် တစစဖြင့် စာအုပ်ဘလော့ဂါလောကဆီသို့ ၎င်းကိုယ်တိုင် လမ်းကြောင်းရှာရောက်လာခဲ့သည်။ အသစ်အသစ်သောထုတ်ဝေမှုများ၊ စာပေအမျိုးအစားခေါင်းစဉ်များ (သို့မဟုတ်) လူငယ်လူရွယ်စာအုပ်စာပေအညွှန်းများစသည့်တို့ကို စိတ်ဝင်စားသူများသည် သူတို့လိုချင်၊ သိချင်သည်များကို Instagram ပေါ်တွင် ပိုပြီးရှာတွေ့လာကြသည်။ ဤတွင်လည်း နိမ့်သောတံခါးထစ်သည် ကြီးကျယ်သောဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်ဟူသည့် အဆိုကမှန်ပြန်သည်။ WordPress ဘလော့ဂ်၏အသေးစိတ်ကျသည့်ဒီဇိုင်းများနှင့် အလုပ်မရှုပ်ချင်လျှင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်တိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုကိုပရိုဂရမ်မရေးချင်လျှင် Instagram အကောင့်တစ်ခုကို ရိုးရှင်းစွာကောက်ဖွင့်ပြီး “bookstagrams” ဟု နားလည်မှုဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြရင်းအမည်တွင်သွားသည့် “စာအုပ်ချစ်သူများအကောင့်” ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သို့သော်ငြား တစ်ခုပြောစရာရှိသည်မှာ Instagram သည် ဓာတ်ပုံပေါ်များပေါ်တွင်အဓိကထားသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် စာအုပ်ဘလော့ဂါများအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်တစားရှိကြသည့် စာအုပ်စာပေသုံးသပ်ဝေဖန်ရေးသည် အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ဘေးရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူစာမျက်နှာပေါ်ရှိ ဓာတ်ပုံများအောက်တွင် တွဲဖက်၍ရေးသားထားသည့်စာများကို အမြည်းသဘောမျိုးမြင်နေရမည့်စာကြောင်းအရေအတွက်သည် သုံးကြောင်းအောက်အထိကန့်သတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီး “more” ဟူသည့် “ဆက်လက်ဖတ်ရှုမည်” ဆိုသောစာတန်းကိုနှိပ်ပြီး ဆက်ကြည့်လျှင်ပင် စာသည်အများဆုံးစာလုံးရေ (၂၂၀၀) အတွင်းရှိရမည်ဖြစ်ရာ တိုတိုနှင့်လိုရင်းရောက်ရမည့်သဘောဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပို၍အရေးပါပဓာနကျသောအလေးပေးမှုမှာ ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံကိုသုံး၍တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အတိုင်းအဆမှာ အကန့်အသတ်မဲ့မိုးတစ်ဆုံးမြေတစ်ဆုံးဖြစ်သည်။ စာအုပ်များကို ကော်ဖီသောက်သည့်ခုံပေါ်တွင် ဖြန့်ကျဲ၍ထားကြသည်။အပြင်ဘက်အပြင်အဆင်ကိုနောက်ခံရှုခင်းပြုလျက်လည်းပြကြသည်။ ဆယ်လ်ဖီရိုက်ရန်အတွက် စာအုပ်ကိုကင်မရာအနားသို့ကိုင်မြှောက်ပြခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်။ စာအုပ်များကို သင်တုန်းဓားအလား ထင်ရှားပြတ်သားကြည့်လင်လှသည့်ကင်မရာမြင်ကွင်းအထဲတွင် အရောင်တောက်တောက်ပပဖြင့် ကွင်းကွက်ကွက်ကွက် ရိုက်ကူးသည်မျိုးလည်းလုပ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဓာတ်ပုံမှာ အပေါ်ကရေးထားသည့်စာမှအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလည်း သီးခြားလွတ်လပ်စွာရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ နည်းလမ်းကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီလုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုပါက ၎င်းသည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုကိုယ်စားပြုထင်ဟပ်ပေးသည့်နမူနာပေါ်ဖိုလီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည့်အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဈေးပန်းလှအောင် ဆွဲဆောင်ကြော်ငြာခြင်းအတွက်လည်းသုံးနိုင်ပေသည်။
“bookstagrammers” များ၏အရေအတွက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဆွေးနွေးကြသောခေါင်းစဉ်တို့မှာလည်း တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေတတ်သည်။ Juli Zeh (သို့မဟုတ်) Sebastian Fitzek ကဲ့သို့ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်များစွာရှိပါသည်။ သို့သော် ပုံနှိပ်တိုက်များ၏ဘလော့ဂါဆက်ဆံရေးဌာနများက တခုတ်တရအသိမှတ်ပြုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည့်စာအုပ်များကလည်း စိတ်ဝင်စားသူအုပ်စုများအကြား ဟိုမှသည်မှသတင်းပြန့်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည်မှာ ဤတွင်လည်း လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကိုစစ်စစ်မှန်မှန်ဖြင့် အထူးဂရုစိုက်လုပ်ဆောင်၍ရသည်ကို လူအများနားလည်သတိထားမိလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် စာအုပ်တိုက်များသည် ဌာနတစ်ခုလုံးမှ ထိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြော်ငြာခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသာတာဝန်ရှိသည့်ဌာနများကို ထားရှိလာကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုအရာအားလုံးထက် စာအုပ်တိုက်များက Instagram ပလက်ဖောင်းသည် တခြားပစ်မှတ်ထားသည့်ပရိသတ်အုပ်စုများဆီသို့လည်းရောက်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
သုသေတနလေ့လာမှုများက Instagram အသုံးပြုသူအများစုသည် အသက်နှစ်ဆယ့်ငါးဝန်းကျင်အရွယ်ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြပြီး ဤသည်မှာ ပျမ်းမျှသတင်းစာဖတ်သူအသက်အရွယ်ထက် သိသိသာသာပိုငယ်သည်။ စာအုပ်အမျိုးအစား အကြောင်းနှင့် လူငယ်လူရွယ်ဆိုင်ရာစာအုပ်စာပေများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုသည် အချိုးကျမြင့်တက်သည်။ ဤအခြင်းအရာများကို သတင်းစာများ၏အနုပညာစာမျက်နှာများထက်၌ ဆွေးနွေးကြခြင်းမပြုသည်မှာ ထုံးစံဖြစ်သော်လည်း Instagram ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တော့ “အမှန်တကယ်ကို ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်” ဟု နှစ်နေရာစလုံးတွင်အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိဖူးသည့် Miriam Zeh ကအတည်ပြုသည်။ Zeh သည် Deutschlandfunk အတွက်စာအုပ်သုံးသပ်ရေးများကိုရေးသားပေးနေပြီး LiteraturhausBonnအဖွဲ့အစည်းက North Rhine-Westphalia ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံဝန်ကြီးဌာန၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှစာပေများကိုအဓိကထားပြီး ထိုစာပေများကိုရည်ရွယ်သည့်လူငယ်အုပ်စုတွေအတွက် သင့်တော်ဆီလျှော်ကိုက်ညီစေရန်ပြုလုပ်လိုသော “Book Up” အမည်ရပရောဂျက်၌လည်း တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ထားသည်။ “Instagram ကခံစားလို့ကောင်းတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေတော့လည်း သိပ်မဟုတ်တာတွေကို နည်းနည်းလေးအလွန်အကျွံမြှောက်ပင့်ချီးကျူးနေကြတဲ့နေရာတခုလိုဖြစ်တာပေါ့” ဟုသူမက ရှင်းပြသည်။
“ဟုတ်တာပေါ့။ ပမာဏအနေနဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကနေရပ်တည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတောင်ပြုနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်အင်ဖလူရန်ဆာတွေရဲ့လောကနဲ့တော့ သွားနှိုင်းလို့မရဘူးပေါ့။ စာအုပ်စာပေကဏ္ဍမှာ နှိုင်းစရာကိုမရှိတာ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဒီစာပေအကြောင်းတွေကိုပြောကြဆိုကြပုံတွေကလည်း စာပေလောကရဲ့စာပေစက်ဝန်းကို သက်ရောက်မှုကရှိတာပဲ။”
တခြားမည်သည့်နေရာကမျှ စင်းလုံချောစီစဉ်တင်ဆက်ထားသည့်ရုပ်ပုံတစ်ခုအတွက် ထိုက်တန်သည့်အသိမှတ်ပြနှစ်သက်မှု‌များကိုသိမ်းကြုံးယူရန်မလွယ်ကူပါ။ မည်သို့ဆိုစေ အမှန်အကန်စာပေဝေဖန်ရေးအတွက် ပို၍ပင်ခက်ခဲသေးသည်။ အမြင်အာရုံပိုင်းတွင်အဓိကထားသည့်အားလျော်စွာ မိမိကိုယ်ကိုယ်ပေါ်လွင်စေရန်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် တစ်စုံတစ်ခု၏အမှတ်အသားကိုသီးသန့် သိသာမြင်သာစေသောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးချကာ အသုံးပြုသူများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြလာကြပြီး “အရန်သင့်ကျေနပ်အားရလွယ်ခြင်း” တွင်ပျော်မွေ့လာကြသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးနက်နဲသည့်အကြောင်းအရာများတွင်စိတ်ဝင်စားခြင်းမျိုး ထိုနေရာတွင်အမှန်တကယ်မရှိပေ။ အသေးစိတ်ခမ်းခမ်းနားနား အလေးအနက်ရေးသားထားသည့် စာပေဆိုင်ရာအသိမှတ်ပြုချီးကျူးထောပနာခြင်း “စာအရှည်ကြီးများ” သည်ကား တခြားတွင်သာနေရာယူလေပါသည်။
Fabian Thomas သည်ဘာလင်မှ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဘလော့ကာနှင့်အလွတ်တန်းတည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ဂီတ၊ စာပေတို့အတွက်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည့် The Daily Frown ကိုလည်းသူက ထုတ်ဝေထားသည်။
မူပိုင်ခွင့် : Text: Goethe-Institut, Fabian Thomas. This work is licensed underaCreative Commons Attribution – Share Alike 3.0 Germany license.
Digitales Leben, Medien, Humboldt-Magazin, Literatur, Literaturmedien